तपाईको फेसबुक एकाउन्टको मूल्य कति हो ? – Vision Khabar
तपाईको फेसबुक एकाउन्टको मूल्य कति हो ?
। १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार २१:०५ मा प्रकाशित
एजेन्सी । तपाईलाई थाहा छ, तपाईले चलाइरहनु भएको फेसबुक एकाउन्टको मूल्य कति होला ? तपाईको मात्र होइन प्रत्येक फेसबुक एकाउन्टको मूल्य १३ डलर यानि नेपाली १३ सय रुपैयाँ भन्दा बढी हुन आउँछ । यस कुराको खुलासा यसै बर्षको ‘एड रिभेन्यु’ अर्थात् विज्ञापन करबाट भएको हो ।